किम जहाँ जान्छन् त्यहाँ टोइलेट बोकेर लान्छन्, तर किन? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७८, शनिबार २ : ५०
उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र उनको देश उत्तर कोरियाबारे विश्वलाई थोरै मात्र जानकारी थाहा छ। किनभने तानाशाही शासन व्यवस्था भएको उत्तर कोरियामा निजी संचारमाध्यम छैनन्। त्यहाँको सरकारी संचारमाध्यमले जे प्रसारण गर्यो त्यही विश्वसम्म पुग्ने हो।
हालसम्म पनि उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा एक जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको दाबी गर्दछ। पछिल्लो समय किम जोङ उन दुब्लो भएको देखिएका छन उनी बिरामी भएर दुब्लाएका हुन् वा शारीरिक व्यायामले दुब्लाएका हुन् त्यो पनि रहस्यको विषय छ।
उत्तर कोरियाबारे धरै रोचक तथ्यहरु छन्। जसमध्ये एउटा यो पनि हो कि त्यहाँका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन जहाँ जान्छन् उनका सहयोगीले उनको लागि व्यक्तिगत शौचालय ‘टोइलेट’ बोकेर गएका हुन्छन्। सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियाको संचारमाध्यम डेली एनकेले पहिलोपटक यो विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
डेली एनके उत्तर कोरियाको समाचारमा मात्र केन्द्रित संचारमाध्यम हो। उक्त संचारमाध्यमअनुसार हरेक ठाउँमा किमको लागि व्यक्तिगत शौचालय हुन्छ। उनले प्रयोग गर्ने हरियो रेलमा र कार पनि शौचालय भएको बताइन्छ। यस्तै विदेश भ्रमणमा हुँदा पनि उनको लागि व्यक्तिगत शौचालय हुन्छ।
सन् २०१८ मा जब किम सिंगापुरमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट्न गएका थिए। त्यहाँ पनि उनले व्यक्तिगत शौचालय लगेका थिए। तर किन उनी जहाँ पनि व्यक्तिगत शौचालय बोकेर लैजान्छन् त? यो आश्चर्यको विषय हो।
तर उत्तर कोरियाबाट भागेका एक पूर्व सेना तथा नर्थ कोरियन गार्ड कमान्डका सदस्य लि युन–कियोलले यो रहस्यको खुलासा गरेका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च नेता किम आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे कसैलाई थाहा नहोस् भनेर व्यक्तिगत शौचालय जता पनि लैजान्छन्। उनका अनुसार शौचबाट किमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कसैलाई थाहा नदिन त्यस्तो गरिएको हो।
गतवर्ष किम जोङ उनको मृत्यु भएको हल्ला नै चलेको थियो। पछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि भने मृत्युको हल्ला अफवाह रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। अहिले उनको वजन नाटकीय रुपमा घटेको छ। तर पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सबै अज्ञात छन्। बिजनेस इन्साइडर र एजेन्सीको सहयोगमा